Kedu ugwu kachasị elu n'ụwa? Anyị na-agwa gị ihe niile | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka ugwu kacha elu n’ụwa anyi na echekari ugwu Everest. E nwere ụzọ dị iche iche iji tụọ ịdị elu ugwu na otu ndị na-eme nchọpụta kpebiri ịlele elu nke nchịkọta niile nke iche himalayan. Ha nwere mmasị n’ugwu nke karịrị ha niile. Ọ bụ n'elu XV.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ugwu kachasị elu n'ụwa ma anyị ga-achọpụta ma Everest bụ ugwu kachasị elu n'ụwa.
1 Ugwu kasị elu n'ụwa
2 Ayszọ iji tụọ ugwu
3 Nhazi nke ugwu kachasị elu n’ụwa
4 Ugwu ochie
Mgbe ndị India bụ ndị Briten na-achị ha, otu ìgwè nke na-eme nchọnchọ malitere ịtụ ọ̀tụ̀tụ̀ elu niile nke ugwu Himalaya. Ha gbakọrọ elu na 9.000 mita n'elu oke osimiri Summit XV. Nke a mere ka ọ bụrụ ugwu kachasị elu n’ụwa niile. N’afọ 1865, ha gbanwere aha nwa nwanne nna a aha ya bụ Everest. Aha a sitere n'aka George Everest, onye ọkachamara Wales nke na-ahụ maka ịlele ihe niile gbasara India. Kemgbe afọ ahụ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-arị ugwu agbalịrị iji merie elu ya iji gosi ụwa na ha etinyela ụkwụ n'ugwu kachasị elu n'ụwa.
Anyị maara akụkọ banyere ụdị akụkọ dị iche iche na-enwebeghị ezigbo njedebe. Ma ọ bụ na iru ụkwụ ndị a site n'ụkwụ anyị na-ebute nnukwu ihe egwu. Site na elu, ọnọdụ gburugburu ebe obibi anaghị adị mma maka ụmụ mmadụ ịnọ ogologo oge. Nrụgide na-ebelata n'ịdị elu dị ka okpomọkụ. Site na ahịhịa na-erughị ala, obere nrụgide na obere oxygen, ịnọ n'ebe dị elu dị mgbagwoju anya. Na nke a anyị na-agbakwunye ihe isi ike nke ọkwa nke ugwu ahụ ka anyị na-abawanye na elu.
Ihe ndị a niile bụ ngwakọta zuru oke maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe mberede dị adị n'akụkọ ihe mere eme nke ndị gbalịrị ịrị ugwu kachasị elu n'ụwa.
Ayszọ iji tụọ ugwu
Y’oburu na anyi atule Everest site n’osimiri, anyi gahu na obu ugwu kacha elu n’uwa. Agbanyeghị, enwere ugwu ndị ọzọ dị elu karịa nke a ma ọ bụrụhaala na anyị ejiri ihe ọzọ iji gbakọọ ịdị elu ya. Anyị maara na usoro nyocha ọ bụla dabere na uche onye nlele. Akụkụ ọzọ ị ga-eburu n'uche n'ụzọ ọ bụla iji tụọ ihe bụ ebe ntụgharị anyị na-ahọrọ.
Ọ bụrụ na anyị jiri ntụaka sitere na ntọala nke ugwu ndị a dabere, anyị na-ahụ na Kilimanjaro na Tanzania na ugwu Mauna Kea na Hawaii dị elu karịa Everest. Dịka ị pụrụ ịhụ, dabere na ntụaka ntụpọ anyị ji atụ ogologo anyị ga-ahụ na ugwu kachasị elu n'ụwa adịghị. Ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ịbịakwute ebe a na-ezo aka na isi ala nke ugwu na-anọdụ kama iwere ịdị elu karịa oke osimiri dị ka isi okwu.
Ugwu Kilimanjaro na-anọdụ ala ala Africa nke dịdebere oke osimiri. Ọ bụrụ na anyị atụlee ugwu a site na isi anyị ga-ahụ na ọ dị elu karịa Everest. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị nyochaa Mauna Kea anyị ga-ahụ na ọ ka elu. Ma ọ bụ na o nwere isi ya na ala oke osimiri ahụ. N'ịbụ onye na-agbọpụ ọkụ, anyị na-ahụ na ntọala ya dị omimi karịa oke osimiri. Ọ bụrụhaala na anyị nyochaa ịdị elu site na isi ebe ugwu ahụ na-anọdụ, nke kachasị elu ga-abụ Mauna Kea.
Nhazi nke ugwu kachasị elu n’ụwa
Ọ bụrụ na anyị ewere oke osimiri dị ka isi okwu, Everest bụ ugwu kachasị elu n'ụwa. Ma ọ bụ na, ihe nzuzo nke ịdị elu nke Everest adịghị na nzuko ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'okpuruala. Otú e si kee ugwu a bụ ụzọ o si biri n’ebe dị elu a. Afọ 50 gara aga, kọntinent kọntinent nke India jikọtara ya na kọntinenti Eshia. Kemgbe ụwa, ọ bụ nkukpọ nkwekọrịta kachasị na narị afọ anọ gara aga. Dị nkwekọrịta dị otu a mere ihe ike nke na efere Indian apụtaghị naanị, kamakwa o tinye ya na mpaghara Eshia. N'ụzọ dị otú a, efere a, nke na-agafe na kọntinent ahụ, welitere ala ala na mbara igwe, na-akpụ Everest.
Ọ bụ ezie na efere tectonic na-adọkpụ gburugburu ụwa, ihe mere n'okpuru Everest bụ ihe pụrụ iche. N'ihi nke a, ugwu a bụ naanị ugwu kachasị elu n'ụwa mgbe mmiri si n'oké osimiri furu efu ya.
Ugwu ugwu Himalayan dị obere na ọ dị naanị afọ 50. Ka efere ndị ahụ na-ebugharị efere ndị India n'akụkụ ugwu na n'okpuru Eshia, ugwu Himalaya na-arị elu. Ka ọ dị ugbu a, ikike ndị a na-arị elu karịa mmetụta mbuze. Dị ka anyị si mara, mbuze nke mmiri na ifufe kpatara, n'etiti ndị ọrụ nchịkwa ala ndị ọzọ amalite ibelata elu nke ọnụ ọnụ ka ekpughere ha. Otu n'ime ụzọ iji chọpụta afọ nke ugwu bụ ịhụ ogo nrọ na mbibi nke nchịkọta ya.
Imirikiti ndị na-arị ugwu na-arịgo elu Everest na-eme ya iji gosi nganga na ha nwere ike ịrị ugwu kachasị elu n'ụwa. Otú ọ dị, ugwu a na-eto eto taa. E ji nkume granite mee ugwu akụkụ ugwu ahụ, otu n’ime nkume ndị kasị sie ike n’ụwa. N'ihi ihe a mejupụtara, ha na-enye ya ohere ịnagide mbuze dị mma karịa ugwu ndị ọzọ na-esighi ike.
Mgbe ala ọma jijiji ikpeazụ mechara na Nepal, ugwu niile dị na mgbago ugwu Kathmandu ha biliri ihe dị ka otu mita. Ya mere, Everest nwere ike ịgbadata ntakịrị. Ihe a bu ihe na-adighi nma na ngụkọta elu. Ọnọdụ mbuze dị n'oge ụfọdụ ma ọ bụ uto nke ịkwanye nke mbadamba. N’agbanyeghi na otutu nde foduru ka aga agha, Everest aghaghi aha ugwu kachasi elu n’elu uwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu kasị elu n'ụwa